Berita Update Online: manfaat daun seledri untuk ibu hamil
manfaat daun seledri untuk ibu hamil Dabcan celery duan ay yihiin kuwo aad la yaqaan iyo yaqaanaan nolol maalmeedkeena . Caleemaha Selleri waxaa loo isticmaalaa sida khudaarta lagu daro faa'iidooyinka celery jirsado mid aan caadi aheyn si ay ula qabsadaan oo cuduro kala duwan .
Waxaa jira Cuntooyinka badan in ay isticmaalaan caleemaha celery sida dhammaystir ah sida maraqa , doofar , maraqa , baasto la shiilay , baasto la kariyey iyo cuntooyinka kale . Selleri leeyahay oo caraf udgoon ee kala duwan iyo ku jira waxyaabo badan oo bir loo baahan yahay jidhku u . Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo Diidmada ay caleenta celery sida laga soo xigtay kesehatan.kompasiana.com .
Kordhin kartaa habka difaaca jirka
Intaa waxaa dheer in ay birta , celery kaloo ku jira vitamin A iyo vitamin C yihiin arena aad u muhiim ah waxa loo isticmaalaa sida an anti - oxidant iyo waxa uu awoodaa in ay kordhiyaan wax soo saarka ee kolojin nudaha iyo maqaarka iyo jidhkeenu sameyn karo si loo ilaaliyo caafimaadka indhaha .
Waxaa loo isticmaali karaa sida an anti - kansarka
Walaxa ku jira celery oo lagu daray artichoke disha unugyada kansarka Ugaarta . Haddii aan baabbi'iyee xaddi ku filan oo ah celery , sidaas darteed haddii na in ay jirto khatar ah oo artichoke Ugaarta oo lagu daray walaxda dili kartaa . Laakiin waxaan sidoo kale in la magdhabo by qaadashada daawada ah in la daaweeyo kansarka . Intaa waxaa dheer , celery sidoo kale ku jira maaddooyin miristin hortagi kara koritaanka unugyada kansarka ee jidhka ku jira .
Naftaada ka cudurrada wadnaha ilaalin karaa
Cudurada Wadnaha sida stroke , wadne iyo wixii la mid yahay in uu yahay cudurada aad u khatar ah ee jidhkeena . Qaar ka mid ah dhibaatooyin caafimaad kuwaas oo ka dhici karaan sabab u ah cunto qaldan , jimicsi qabsiyada , iyo sidoo kale ka dhici karaan sababtoo ah jidhku u dabiici ah soo saartaa keenikarto ee amino acid taas oo faragalin ku samayn kara shaqo ee xididdada dhiigga . Selleri khudaar ku jiraan folic acid ama vitamin B9 waa mid aad u wanaagsan yahay jirka maxaa yeelay waxa ay cid ka hadli kartaa keenikarto amino acid ku galay Moleekuleyaasha ka sahlan in si sahlan loo jidhku u nuugo .
Waxaa loo isticmaali karaa sida an anti - bararka
Haddii aad arthritis , laabotooyinka iyo turqo ka dibna celery waa xalka . Sababtoo ah celery yarayn kartaa barar iyo xanuun kala goysyada ku wareegsan cuntada sidaas selendri heer sare oo loogu talagalay dadka ka cabanaya dhibaatooyin sida .
Sidoo kale faa'iidooyinka caleen soursop , haddii aan kaliya ka baxaan oo keliya oo aan tijaabinin ka dibna waxaan marna dareemi doontaa ah isla oggolyahay talada iyo waxtarka ka dhigtee , kuwaas . Ma waxaad ka heli faa'iidooyinka celery maanta?
Diposting oleh Lisa Fernandez di 18.30